आईपीएल क्वालिफायर टू : फाइनल प्रवेशका लागि दिल्ली र हैदराबाद भिड्दै
बर्दिबास बालिका हत्या प्रकरण : तनाव बढ्दै गएपछि चार बुँदे सहमति
विराटनगर, २३ कात्तिक । युएईमा जारी १३औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल)मा पहिलो पटक फाइनल पुग्दै इतिहास बनाउन प्रयासरत टोली दिल्ली क्यापिटल्सले आज दोस्रो क्वालिफायरमा इलिमिनेटरको विजेता टोली सनराइजर्स हैदराबादसँग खेल्दैछ ।
शेख जायेद रंगशालामा खेल्दैछ हुने यस खेल बेलुकी ७ः४५ मा हुनेछ । यी दुईबीचको खेलमा सफल हुने टोलीले २०२० आईपीएल उपाधि जित्न मुम्बई इन्डियन्सको सामना गर्नु पर्नेछ ।
पहिलो क्वालिफायरमा दिल्लीलाई ५७ रनले हराउँदै मुम्बई उपाधि रक्षा गर्न तम्तयार भएर बसिरहेको छ । सर्वाधिक चार पटक आईपीएल उपाधि जितिसकेको मुम्बईले यस पटक फाइनलमा आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी कसलाई पाउने हो त्यो आजको खेलले बताउनेछ ।
निकै उतारचढावका बीच प्लेअफमा पुग्न सफल भएको टोली हो हैदराबाद । अन्तिम चारमा छनौट हुन प्रतियोगिताकै उत्कृष्ट फर्ममा रहेको मुम्बईको सामना गर्नु पर्दा उसलाई कम्ति दबाब थिएन ।
तर दबाबका बीच मुम्बईविरुद्ध खेलेको अन्तिम खेलमा हैदराबाद १० विकेटले विजयी हुँदै अंकतालिकाको तेस्रो स्थानमा उक्लँदै इलिमिनेटरको लागि छनौट हुन सफल भयो ।
लिग चरणका चौधमध्ये सात खेलमा जित र समान सात खेलमा नै हार भोगेको हैदराबादले आफूलाई अब्बल ठहराउन निकै मिहिनेत गर्न प¥यो । पहिलो चरणका सातमध्ये तीन खेलमा मात्रै जित निकालेको हैदराबाद दोस्रो चरणका अन्तिम तीन खेलमा सम्हालिन सफल भएपछि प्लेअफमा पुगेको थियो ।
हैदराबादले खेलेका अन्तिम तीन खेल अंकतालिकाका शीर्ष तीन स्थानका टोलीविरुद्ध नै भएकाले उसलाई थप राहत मिल्यो ।
आफ्नो १२औं खेलमा दिल्लीलाई ८८ रनले स्तब्ध बनाएको हैदराबादले तेह्रौ खेलमा बैंग्लोरलाई पाँच विकेट र चौथौ खेलमा मुम्बईलाई १० विकेटको विशाल अन्तरले पराजित गर्न सफल भएपछि अन्ततः ऊ अंकतालिकाको तेस्रो स्थानमा उक्लदै इलिमिनेटरमा आई पुग्न सफल भयो ।
इलिमिनेटरमा खराब लयबाट गुज्रिरहेको बैंग्लोरलाई ६ विकेटले पराजित गरेपछि हैदराबादले दिल्लीविरुद्धको दोस्रो क्वालिफायरमा भेट पक्का गरेको हो । जारी संस्करणको आईपीएल यात्रा गतिलो तरिकाले सुरु गरेको दिल्लीले पछिल्ला खेलहरूमा भने आफ्नो लय गुमाइरहेको छ । चौधमध्ये आठ खेल जित्दै अंकतालिकाको दोस्रो स्थानमा रहेर लिग चरण अन्त्य गरेको दिल्ली जारी आईपीएलका पछिल्ला छमध्ये एक खेलमा मात्रै विजयी भएको छ ।
जित निकाल्न संघर्षरत दिल्ली र पछिल्ला खेलहरूबाट फर्ममा देखिएको हैदराबादमध्ये आजको खेलमा कसले बाजी मार्ने हो त्यसको जवाफ खेलको नतिजाले पक्कै दिनेछ ।
२०१३ आईपीएलबाट प्रतियोगितामा डेब्यू गरेको हैदराबादको यो लगातार पाँचौ र समग्रमा छैटौं प्लेअफ यात्रा हो । डेब्यू सिजन नै प्लेअफ पुग्न सफल भएको हैदरबादले त्यसपछिका दुई सिजन भने छैटौं स्थानमा रहँदै प्रतियोगिता सकाएको थियो । तर लगत्तैको सिजन आईपीइएल च्याम्पियन बन्न सफल भएको हैदराबाद त्यस यता भने उपाधि जित्न सफल हुन सकेको छैन ।
२०१६ मा च्याम्पियन भएयताको हरेका सिजन प्लेअफसम्मको यात्रा तय गर्न हैदरबाद सफल भए पनि एक पटक उपविजेता र दुई पटक इलिमिनेटरबाट बाहिरिएको छ । यस पटक इलिमिनेटर पार गरी हैदराबाद दोस्रो क्वालिफायरमा आइपुगिसकेकाले आज खेल हारे पनि तेस्रो हुँदै उसले २०२० आईपीएल यात्रा टुंग्याउनेछ ।
यता दिल्लीको लागि भने यो नौ वर्षपछिको लगातार दोस्रो पटक आईपीएलको प्लेअफसम्मको यात्रा हो । २०१८ डिसेम्बरमा दिल्ली डेयर डेभिल्सबाट दिल्ली क्यापिटल्समा परिणत भएपछि भने उसले खेलेका दुवै सिजनमा आफूलाई कम्तिमा पनि दोस्रो क्वालिफायरसम्म पु¥याउन सफल भइरहेको छ । यसभन्दा अघि दिल्ली आईपीएलको पहिलो (२००८) र दोस्रो (२००९) संस्करणमा प्लेअफसम्म पुग्न सफल भएको थियो ।
१२ वर्ष आईपीएल यात्रा तय गरिसकेको दिल्ली आजको खेलमा विजयी हुँदै पहिलो पटक फाइनल पुग्न चाहन्छ । आईपीएल ईतिहासमा तीन पटक दोस्रो क्वालिफायर खेले पनि दिल्लीले हालसम्म फाइनल यात्रा तय गर्न सकेको छैन । पछिल्लो पटक २०१९ आईपीएलको दोस्रो क्वालिफायरमा चेन्नईसँग पराजित हुँदै दिल्लीले आफ्नो यात्रा टुंग्याएको थियो ।
तर यस पटक दिल्लीसामु फाइनल पुग्न सक्ने मौका छ । पहिलो क्वालिफायरमा जित निकाल्न नसकेको दिल्ली के दोस्रो क्वालिफायरमा जित निकाल्दै फाइनल पुग्न सफल होला ? यसको लागि हामीले खेलको नतिजा पर्खनुपर्ने हुन्छ ।
आईपीएल ईतिहासमा यी दुईले हालसम्म १७ खेल खेलिसकेका छन् । खेलिएका सत्रमध्ये हैदराबादले एघार खेल आफ्नो पक्षमा पार्दा दिल्ली ६ खेलमा मात्रै सफल भएको छ । यसै सिजन मात्र यी दुईले एकअर्काविरुद्ध खेलेका दुवै खेलमा हैदराबाद विजयी हुनुले पनि दिल्लीविरुद्ध हैदराबाद हाबी भएको पुष्टि गर्छ ।
आईपीएलको एघारौं खेलमा पहिलो पटक मैदान उत्रिएका यी दुईमध्ये १५ रनले विजयी हुँदै हैदराबादले खेल आफ्नो पक्षमा पारेको थियो । यस्तै, जारी सिजनकै ४७औं खेलमा पुनः यी दुई एक अर्काविरुद्ध मैदान उत्रिएका थिए । तर सो खेलमा पनि हैदराबादले दिल्लीलाई ८८ रनले पराजित गर्न सफल भएको थियो ।
यी दुईबीच एकै संस्करण लगातार तीन पटक भेट हुन लागेको यो दोस्रो पटक हो । अघिल्लो संस्करण अर्थात् २०१९ आईपीएलमा पनि यी दुईबीच तीन खेल भएका थिए । पहिलो भेटमा हैदराबाद पाँच विकेटले विजयी भए पनि दोस्रो भेटमा भने दिल्लीले ३९ रनले विजयी हुँदै खेल आफ्नो पक्षमा पारेको थियो ।
तेस्रो स्थानमा रहँदै लिग चरण सिध्याएको दिल्लीले चौथो स्थानमा रहँदै प्लेअफमा आई पुगेको हैदराबादलाई इलिमिनेटरमा दुई विकेटले पाखा लगाएको थियो । त्यसैले आजको खेलमा दुवै टोलीसँग एकअर्काविरुद्ध बदला लिने सुवर्ण मौका छ । दिल्लीलाई यसै संस्करणका दुवै खेलमा भोगेको हारको बदला लिँदै ऐतिहासिक फाइनल पुग्ने मौका छ भने अघिल्लो संस्करणको इलिमिनेटरको हारको बदला लिने हैदरबादसँग अवसर छ ।
हैदराबादसँग जारी प्रतियोगितामा नै दुवै खेलमा पराजित भइसकेको र पहिलो क्वालिफायरमा मुम्बईसँग पराजित हुँदै फाइनल पुग्नबाट रोकिएकाले आज दिल्ली निकै दबाबमा हुनेछ । लगातार खराब प्रदर्शन गरिरहेकाले आजको खेलमा उत्कृष्ट कमब्याक गर्दै दिल्ली इतिहास रच्न चाहन्छ । र, यसका लागि उ तयार छ ।
सुरुआती खेलहरुमा निकै सफल देखिएका दिल्लीको बलिङ, ब्याटिङ र फिल्डिङ आजको खेलमा फेरी ब्यूँतिनेछ र हैदराबादविरुद्ध उत्कृष्ट देखिनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त रहन सक्छौं ।
पाँच सय २५ रन बनाएर आईपीएल खेलिरहेका शिखर धवन र चार सय ३३ रन बनाइसकेका कप्तान ऐयर आजको खेलमा लयमा देखिने हो भने हैदराबादले खेल जित्न निकै गाह्रो पर्नेछ । यी दुई बाहेक तीन सय चौध रन बनाएर खेलिरहेका स्टोइनिस, दुई सय ८५ रन बनाएका पन्त, दुई सय २८ रन बनाएका शअ, एक सय ३८ रन बनाएका हिटमेयर, एक सय एघार रन बनाएका रहाणे र एक सय आठ रन बनाएका अक्सर आजको खेलमा दिल्लीको ब्याटिङमा चम्किनु आवश्यक रहन्छ ।
साथै, २५ विकेटसहित आईपीएलको दोस्रो सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडी रबाडा, तीव्र गतिका बलर अर्निक नोर्किया, स्पीनरद्व रविचन्द्रन आश्विन र अक्सर पट्टेल दिल्लीको जितका लागि आज फर्ममा देखिन अत्यन्तै आवश्यक रहन्छ ।
तर डेभिड वार्नर, रासिद खान, केन विलियमसन, जोसन होल्डर जस्ता उत्कृष्ट खेलाडी सम्मेलित हैदराबादलाई कमजोर आँक्न कुनै हालतले मिल्दैन । दिल्लीलाई दुवै खेलमा पराजित गरिसकेकाले पनि आजको खेललाई लिएर हैदराबाद केही उत्साहित देखिन्छ र यो स्वभाविक पनि हो ।
दिल्लीविरुद्धको खेलमा निकै सफल देखिएका कप्तान वार्नर पाँच सय ४६ रन बनाएर ओरेन्ज क्यापको दाबेदारी र राशिद खान १९ विकेटसहित सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडीको सूचीको पहिलो स्थानमा आउन संघर्षरत छन् ।
यी दुईबाहेक मिचेल र्माचको रिप्लेसमा टोलीमा आएका जेसोन होल्डर, केन विलियमसन, टी नटराजन, सन्दीप शर्मा र विकेटकिपर ब्याट्सम्यान ऋिद्धिमन शाहको प्रर्दशन पनि तारिफयोग्य छ ।
यस्तै, हैदराबादको दोस्रो क्वालिफायरसम्मको यात्राका लागि जोनी बेयरस्टो, मनिष पाण्डे, शाहबाज नदिम, विजय शंकर र खलिल अहेमदको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ ।
अनुभवले निखारिएका वार्नर र युवा जोशले भरिएका ऐयरमध्ये आजको खेलमा जित निकाल्दै को २०२० आईपीएलको फाइनलमा पुग्न सफल हुने हो ? यो प्रश्नको जवाफ आजको खेलको नतिजाले दिनेछ ।